Alọ ọrụ na-ezughị ezu na-agwa atụmanya ịga ije | Martech Zone
Otu n'ime ihe ndị m tụrụ anya na launching anyị n'ụlọnga 7 afọ ndị gara aga bụ na m chọpụtara na ndị gị n'ụlọnga ụlọ ọrụ wuru ihe na mmekọrịta karịa na ọ bụ uru nke ọrụ. Ọbụna m ga-agarịrị ịsị na ọ dabere na uru nke mmekọrịta ahụ.
Onye ahịa gị ọ tụkwasịrị gị obi ma gị na ha na-arụ ọrụ ọtụtụ afọ? Ọfọn, nke ahụ ga - eduga na ndị na - ezo aka na mmekọrịta dị mma. You gosipụtawo onye ahịa gị ihe ịtụnanya, dịka teknụzụ ọhụụ na tiketi maka nnukwu ọgbakọ na-esote? Ọ ga-eju gị anya na ndị ahịa ole ga - enweta gị.
You nyere onye ahịa gị uru? Ọ dị mwute na nke ahụ enweghị mmetụta nke ndị ọzọ na-eme. Anyị na-asọpụrụ ọrụ anyị oge niile dabere n'otú anyị si bulie ma mee ka ndị ahịa anyị gaa n'ihu. O juru anyị anya na ụfọdụ n’ime ha emeghị otú ahụ.
Kemgbe ọtụtụ afọ, ka anyị na-ewere ndị ahịa, anyị na-eme ọtụtụ ihe arụ ọrụ iji hụ na ha bụ ezigbo ndị ahịa maka anyị dịka ha na-anwale iji hụ ma anyị bụ ndị ahịa kwesịrị ekwesị maka ha. Oge ụfọdụ atụmanya chọrọ ịga n'ihu ma anyị adala azụ ma ọ bụ pụọ. Oge ụfọdụ azụmahịa anyị na - arụ ọrụ na - agbanwe onye ndu ma anyị adaala azụ ma ọ bụ pụọ.
Mgbe anyị kwụsịrị otu nnukwu ndị ahịa, onye nduzi ha ọhụrụ dọrọ aka ná ntị, sị, “Ikwesịghị ire àkwà mmiri gị ọkụ.” Agwara m ya na anyị achọghị ime nke ahụ mana ọ na-emehie nnukwu ihe na-ahapụ usoro anyị mepụtara. O meela ka ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ na-achọ ihe n'ịntanetị ọtụtụ ugboro n'ime afọ. Ọ kwara emo na ọ maara nke ọma. Ya mere azaghachiri m na anyị ga-alọghachi mgbe ọ hapụrụ ụlọ ọrụ ahụ. Afọ ole na ole ka e mesịrị, m na-atụ ụjọ na anyị nọ nso - ụlọ ọrụ ahụ efunahụla ike niile anyị nyere ha… wee ụfọdụ. Enwere m ike ịgba ọkụ m na ya, mana m kwenyere na anyị ga-enyere ụlọ ọrụ ahụ aka n'oge na-adịghị anya.
Kacha nso nso, anyị nwere okomoko mkpọsa tinyekwa kpọtụrụ anyị maka enyemaka. Azụmaahịa ahụ na-agbanwe nwe ya na onye nwe ya na netwọkụ dị egwu na-eresị ụfọdụ ndị nwere ụmụ amaala nwere ọgụgụ isi azụmaahịa ahụ. Ọ bụ ezie na ọ na-agagharị, ọ na-echegbu onwe ya banyere ihe nketa ya ma chọọ ijide n'aka na ndị nwe ụlọ ahụ nwere ihe ịga nke ọma. Ebe ọ bụ na ha enweghịzi ike ịdabere na ya ya network, ọ kpọtụrụ anyị iji hụ ma ọ bụrụ na anyị nwere ike ịmalite mmata ma chọọ n'ịntanetị.
N'ezie, anyị nwere ike. Anyị gosipụtara ọtụtụ nsogbu na-adịghị ala na ntanetị ha yana yana anyị tụlere usoro ndị na-adịbeghị anya na ụlọ ọrụ ya. Ọ bụ ezie na ọ kwenyere na ụlọ ọrụ ya ga-adalata, anyị hụrụ nnukwu mmụba na mgbasawanye na ntanetị. Mpaghara ụlọ ahịa ya nwere ngwaahịa na ọnụ ọgụgụ iji gaa mba - ọ dịtụbeghị mgbe ọ rụrụ ọrụ na ọnụọgụ ahụ ebe ọ nwere ike ịdabere na netwọkụ ya.
Ka anyị na-abịarukwu nso n’ịkparịta ụka gbasara mmefu ego na atụmatụ, ọ malitere ịlaghachi azụ na mmefu ego ya pere mpe. Anyị tụlere netwọkụ ya na afọ ole ọ were wuo ya. Anyị tụlere ọchịchọ ọ chọrọ iji kwado ma bulie azụmaahịa ahụ. Ọ laghachiri na ọ dị ya ka nke ahụ nwere ike ịla ego n'iyi, naanị dochie saịtị ọ wuru nke na-enyereghị azụmaahịa ya aka ma ọlị. Anyị gwakwara ya atụmatụ ndị anyị ga - ewepụta - na ọ bụghị naanị saịtị, ọ na - akara aha, nkwalite ngwaahịa, ọdịnaya, nyocha ọchụchọ, ikike ecommerce… ọ naghị atụgharị.
Ihe omuma atu abuo bu ulo oru ndi nwere ikike di egwu. Nke mbụ, anyị nyeere aka iru ma tolite ikike ọ nwere na ọ kpatara ọtụtụ nde dollar na ala ụlọ ọrụ ahụ. Enwere m ike ijide gị na ego anyị nwetara dị ọkara nke nke ahụ. Nke abụọ nwere ikike maka ọtụtụ nde dollar, mana onye nwe ya enweghị ike ịhụ ya n'agbanyeghị otu anyị si nwaa ịkọwa ya. Ikekwe anyị nwere ike ịge ntị na onyinye ahụ yana ụfọdụ uru… mana enwere m obi abụọ na ọ gaara enye aka. Anyị ka kwesịrị ịzụta-na si ahịa na a ọkpụrụkpụ ego mere ka ịkwaga agịga.
Ya mere, anyị jere. Mgbe ọ gwara anyị ka anyị lọghachi kwurịtakwuo, anyị mere ka ọ mata na anyị gafere. Anyị nwere atụmanya ndị ghọtara ohere na mmetụta ọrụ anyị nwere na ndị ahịa ndị ọzọ.
Ọ ga-ewepụta usoro dijitalụ? O yikarịrị… ọ ga-ahụ ụfọdụ ndị ọrụ ga na-arụ ọrụ ụfọdụ maka ya. Onye karịrị akarị, na-ebido ọrụ ma ọ bụ mkpọsa, wee hapụzie obere ego na onye ahịa anaghị eme nke ọma. Ọ dị m ka ọ bụrụ na ụlọ ọrụ anaghị agụ agụụ ma ndị ọzọ ga-agwa atụmanya ahụ jee ije. Ọtụtụ afọ gara aga, agaraghị m ekwu ya.
Ọtụtụ afọ gara aga, agaraghị m ekwu ya. A gaara m ekwu na ọ bụ ọrụ anyị ịkụziri ndị nwere atụmanya na ndị ahịa anyị. Ọ bụrụ na ha amataghị uru na itinye ego dị mkpa ka e mee, nke ahụ kpatara anyị. Ma ọ bụghị ọzọ… Ọ bụrụ na atụmanya ma ọ bụ ndị ahịa enweghị ike ịhụ na ụwa agbanweela, na ndị na-asọmpi ha n'ịntanetị na-eri nri ehihie ha, na na ha kwesịrị ịdị oké njọ na itinye pasent nke nnukwu ego ha nwetara n'ime mbọ ahịa ha, I Agaghị m egbusi oge m ọzọ ịkọwa ya.
Enwetaghị m otu izu ma ọ bụ karịa gara aga Ndị na-ere ahịa so na nsogbu ahụ, na-esetịpụ nnukwu atụmanya na ụgwọ dị ala dị ala. N'ihi ya, onye ahịa ahụ enweghị ihe ịga nke ọma na, ebe ọ bụ na ọnụahịa nke ọrụ ha kwụrụ maka arụghị ọrụ, ha na-ala azụ itinye ego karịa. Ọ bụrụ na onye ọ bụla na-ekwu maka etu ihe a si dị mfe (mgbe ọ bụghị), anyị nwere nsogbu ụlọ ọrụ.
Kedu ihe ị chere? Enwere m akaghi aka na nzaghachi m? Enwere ike m na-eme nke a ogologo oge ma m na-aghọ onye nzuzu.
Tags: gị n'ụlọngantinye ego nke ụlọ ọrụ-erindị na-agbapụ ndị ahịaigba egbe atụmanyaahịa gị n'ụlọnga na-erimarketing atụmatụlaghachi azụmaahịaROIuru